Panasonic Lumix DC-G95 Mirrorless Digital Camera with 12-60mm Lens – Internet Journal
Micro Four Thirds Live MOS Sensor ပါဝင်ပြီး Venus Engine Image Processor ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ 20.3 Megapixel နဲ့ဖြစ်ပြီး ဓာတ်ပုံကို JPEG Format အပြင် RAW File နဲ့ပါ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုကို 4K UHDကို 30fps အထိ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ ဒီဈေးနှုန်းက Lumix G Vario12-60mm Lens အပါအ၀င် ဈေးဖြစ်ပါတယ်။
JPEG File အတွက် Frame per second 9fps မြန်နှုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတုအကြမ်းခံ နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ ISO Sensitivity က Auto, 100 to 25600 စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် ။ ၃ လက်မအရွယ်ရှိ လိုသလို လှည့်နိုင်တဲ့ Free-Angle Touchscreen ပါဝင်ပါတယ်။View finder အတွက်ကိုတော့ 0.74 x -2.36m-Dot OLED Viewfinder ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ချိတ်ဆက်မှုပိုင်းအတွက် 1/8″ Headphone, 1/8″ Microphone, 2.5mm Sub-mini (2-Ring), HDMI A (Full Size), USB 3.0, USB Type-C, X-Sync Socket စတာ တွေပါဝင်ပါတယ်။ကြိုးမဲ့စနစ် အတွက် Wi-Fi စနစ် ထည့် သွင်းပေးထားပါတယ်။Focus ပိုင်းမှာ DFD (Depth-From-Defocus) နည်းပညာအ သုံးပြုထားပြီး Continuous-Servo AF (C), Flexible (AFF), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) တွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Point အနေနဲ့ 49 Contrast-Detect ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်ရှာကြံပြီးပြောကြေး ဆို ရင်တော့ Sensor Size သေးငယ်မှုပါ။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုမှာ 16:9 ratio တစ်ခုပဲ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံအတွက် RAW File နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
Portrait, Landscape, Street အစရှိတဲ့ ပုံတွေအတွက် စွယ်စုံသုံးနိုင်မယ့် Pro Camera တစ်လုံးနီးပါးသဖွယ်ဖြစ်ပြီး ကင်မရာသမားတွေအနေနဲ့ လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ အနေအထားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက ဗီဒီယိုပိုင်းမှာ ဘက်ထရီမကုန်မချင်း ကတ်မပြည့်မချင်း ဆက်တိုက်ရိုက်နိုင်သလို color grading ကို မိမိစိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Photo Style modes တွေ
Filter modes တွေလည်း အများအပြား ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
File Format တွေအနေနဲ့ JPEG သာမက RAWFile နဲ့ပါ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုပိုင်းမှာ 4K @30fps, အထိ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ Shutter Speed အနေနဲ့ အနှေးဆုံး 60” ကနေ 1 / 4000 အထိ ရရှိနိုင်သလို Electronic Shutter နဲ့ဆိုရင် 60’’ to 1/16000 အထိ ရပါတယ်။ Bult-in Flash အနေနဲ့ ပါဝင်သလို External Flash တပ်ဆင်နိုင်တဲ့ Hot Shoe လည်းပါဝင်မှာပါ။
Exposure Mode အနေနဲ့ Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority တို့ကို ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Metering အနေနဲ့ Center-Weighted Average Metering, Multiple, Spot Metering, Highlight Weightedစတာတွေ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ White balance အနေနဲ့လည်း Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash,
Incandescent, Shade, White Set 1, White Set 2, White Set 3, White Set4စတာတွေ အပြည့်အစုံ ပါဝင်ပါတယ်။2.36m-dot အရည်အသွေးရှိ 0.74x-Magnification OLED Viewfinder ပါဝင်ပါတယ်။ Display အနေနဲ့ ၃ လက်မ အရွယ်ရှိပြီး 1.24m-dot အရည်အသွေးရှိ Free-Angle Touchscreen ကို ထောက်ပံ့ပေး ထားပါတယ်။DMW-BLC12 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1200 mAh ဘက် ထရီ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးအား အပြည့်သွင်းထားရင်ရိုက်ချက် ၂၉၀ လောက် ရိုက်နိုင်ပါ တယ်။ Lumix G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် 35mm မြင်ကွင်းနဲ့ဆိုရင် 24-120mm အနေအထားနဲ့ ရရှိနိုင်မှာပါ။
Micro Four Thirds Live MOS Sensor ပါဝငျပွီး Venus Engine Image Processor ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ 20.3 Megapixel နဲ့ဖွဈပွီး ဓာတျပုံကို JPEG Format အပွငျ RAW File နဲ့ပါ ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ ဗီဒီယိုကို 4K UHDကို 30fps အထိ ရိုကျကူးနိုငျမှာပါ။ ဒီစြေးနှုနျးက Lumix G Vario12-60mm Lens အပါအဝငျ စြေးဖွဈပါတယျ။
JPEG File အတှကျ Frame per second 9fps မွနျနှုနျးနဲ့ ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ ရာသီဥတုအကွမျးခံ နိုငျဖို့အတှကျကိုလညျး တညျဆောကျပေးထားပါတယျ။ ISO Sensitivity က Auto, 100 to 25600 စှမျးဆောငျနိုငျပါတယျ ။ ၃ လကျမအရှယျရှိ လိုသလို လှညျ့နိုငျတဲ့ Free-Angle Touchscreen ပါဝငျပါတယျ။View finder အတှကျကိုတော့ 0.74 x -2.36m-Dot OLED Viewfinder ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ ခြိတျဆကျမှုပိုငျးအတှကျ 1/8″ Headphone, 1/8″ Microphone, 2.5mm Sub-mini (2-Ring), HDMI A (Full Size), USB 3.0, USB Type-C, X-Sync Socket စတာ တှပေါဝငျပါတယျ။ကွိုးမဲ့စနဈ အတှကျ Wi-Fi စနဈ ထညျ့ သှငျးပေးထားပါတယျ။Focus ပိုငျးမှာ DFD (Depth-From-Defocus) နညျးပညာအ သုံးပွုထားပွီး Continuous-Servo AF (C), Flexible (AFF), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S) တှေ ရရှိနိုငျပါတယျ။ Point အနနေဲ့ 49 Contrast-Detect ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
အပွဈရှာကွံပွီးပွောကွေး ဆို ရငျတော့ Sensor Size သေးငယျမှုပါ။ ဗီဒီယိုရိုကျကူးမှုမှာ 16:9 ratio တဈခုပဲ ရရှိနိုငျပါတယျ။ ပွီးတော့ ဓာတျပုံအတှကျ RAW File နဲ့ ပတျသကျပွီး အသေးစိတျ ဖျောပွထားခွငျး မရှိသေးပါဘူး။
Portrait, Landscape, Street အစရှိတဲ့ ပုံတှအေတှကျ စှယျစုံသုံးနိုငျမယျ့ Pro Camera တဈလုံးနီးပါးသဖှယျဖွဈပွီး ကငျမရာသမားတှအေနနေဲ့ လကျလှမျးမီနိုငျတဲ့ အနအေထားလညျး ဖွဈပါတယျ။ အဓိကက ဗီဒီယိုပိုငျးမှာ ဘကျထရီမကုနျမခငျြး ကတျမပွညျ့မခငျြး ဆကျတိုကျရိုကျနိုငျသလို color grading ကို မိမိစိတျကွိုကျ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ Photo Style modes တှေ
Filter modes တှလေညျး အမြားအပွား ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။
File Format တှအေနနေဲ့ JPEG သာမက RAWFile နဲ့ပါ ရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ ဗီဒီယိုပိုငျးမှာ 4K @30fps, အထိ အသုံးပွု နိုငျပါတယျ။ Shutter Speed အနနေဲ့ အနှေးဆုံး 60” ကနေ 1 / 4000 အထိ ရရှိနိုငျသလို Electronic Shutter နဲ့ဆိုရငျ 60’’ to 1/16000 အထိ ရပါတယျ။ Bult-in Flash အနနေဲ့ ပါဝငျသလို External Flash တပျဆငျနိုငျတဲ့ Hot Shoe လညျးပါဝငျမှာပါ။
Exposure Mode အနနေဲ့ Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority တို့ကို ရှေးခယျြ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ Metering အနနေဲ့ Center-Weighted Average Metering, Multiple, Spot Metering, Highlight Weightedစတာတှေ ထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။ White balance အနနေဲ့လညျး Auto, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Flash, Incandescent, Shade, White Set 1, White Set 2, White Set 3, White Set4စတာတှေ အပွညျ့အစုံ ပါဝငျပါတယျ။2.36m-dot အရညျအသှေးရှိ 0.74x-Magnification OLED Viewfinder ပါဝငျပါတယျ။ Display အနနေဲ့ ၃ လကျမ အရှယျရှိပွီး 1.24m-dot အရညျအသှေးရှိ Free-Angle Touchscreen ကို ထောကျပံ့ပေး ထားပါတယျ။DMW-BLC12 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 1200 mAh ဘကျ ထရီ ထောကျပံ့ပေးထားပွီးအား အပွညျ့သှငျးထားရငျရိုကျခကျြ ၂၉၀ လောကျ ရိုကျနိုငျပါ တယျ။ Lumix G Vario 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့အတှကျ 35mm မွငျကှငျးနဲ့ဆိုရငျ 24-120mm အနအေထားနဲ့ ရရှိနိုငျမှာပါ။